Option ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ | ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့
THE NEXT ကိုလူမှုဆက်သွယ်ရေးမဲပေး!
Option ကိုအကြောင်း | အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ပံ့ပိုးမှု option ကို
internal option ကို
မဲပေး - Next ကိုအဝန်း
John Hickenlooper သည်ရာသီဥတုဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုစိတ်အားထက်သန်စွာထောက်ခံသည်
Oxfam သည် Vitoria Fonseca နှင့်တ ဦး တည်းသွားကြသည်
in အဆိုပါအဲန်ဂျီအိုများ၏သတင်းများ, ဗီဒီယိုများ
မေီ Klobuchar ကအများပြည်သူပိုင်မြေများတွင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာအသစ်ငှားရမ်းခြင်းကိုတားမြစ်ရန် "လေ့လာမည်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်
အမေဇုံကိုမေးကြည့်ပါ - ဘာကြောင့်ဒီလောက်ညစ်ပတ်နေတဲ့စွမ်းအင်က Cloud ကိုသုံးတာလဲ။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည် Sargasso ပင်လယ်ရှိလိပ်များကိုလေ့လာကြသည်
in သိကောင်းစရာများ, ဗီဒီယိုများ
ဒက်ထရွိုက်မူလတန်း Debate Recap
ဇူလိုင် 30 တွင်ပြုလုပ်သည့်အစိမ်းရောင်အသစ်သဘောတူညီမှု၏ဆန္ဒပြမှုကို Make Detroit ၏အင်ဂျင်မှအစီရင်ခံပါ။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို Frontline Detroit Organizing […] နောက်ထပ်
linkedinXingTumblr သည်RedditFlipboardကွေးနနျးစာစာပို့GooglediggStumbleuponVkPrintအရသာရှိသောbufferSubscribeWeiboအိတ်MailrumeneameOdnoklassnikiManagewpလိုင်းYummlyFrypeSkype ကိုhacker ကသတင်းများ
Whole Foods နှင့်အခြားစူပါမားကက်များ၌သင်ဝယ်သောအစားအစာနောက်ကွယ်တွင်ဘာရှိသနည်း။
Oxfam's Behind the Barcodes ကမ်ပိန်းသည်လူ့ဆင်းရဲဒုက္ခများသည်ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူသောအစားအစာတွင်အလွန်အသုံးများသောအရာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အလုပ်သမားများအလွဲသုံးစားမှု […] နောက်ထပ်
ဒုတိယနှစ်တွင် Oxfam's Behind The Barcodes မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသည်စူပါမားကတ်စင်များပေါ်တွင်စားနပ်ရိက္ခာနောက်ကွယ်ရှိလူသားများခံစားနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုဖော်ထုတ်သည်။ ကျနော်တို့ [... ] နောက်ထပ်
in အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့
"မယ့်အစား, ဤရှေးဟောင်းသစ်ပင်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏, ထို Trump အုပ်ချုပ်မှု [ ... ] ယင်း၏မဆင်မခြင်ရာသီဥတုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးချေမှုန်းရေးနှင့်အတူမျိုးစိတ်မှတံခါးသော့ကိုခြိမ်းခြောက်မှုများပိုဆိုးနေသည် နောက်ထပ်
in ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
မင်နီဆိုတာဥပဒေပြုလွှတ်တော် '' သန့်ရှင်းစွမ်းအင်ပထမဦးစွာ '' မူဝါဒကိုမစဉ်းစား
ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းစစ်တိုက်ခြင်းငှါ DFL အမတ်များ '' အစီအစဉ်မှာအဓိကကျတဲ့ 2050 အားဖြင့်စွမ်းအင်ဇယားကွက် Carbon-အခမဲ့လုပ်လိမ့်မယ်လို့တစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည်။ သို့သော်မှာ [ ... ] နောက်ထပ်
in အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့, Initiatives နှင့်အသနားခံ, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ဤတွင်ကျွန်တော် USA တွင်လက်ရှိအသနားခံနှင့်အစပျိုးစုဆောင်းပါ။ နောက်ထပ်
သငျသညျမှ e-mail, ကနေတဆင့်အပြုသဘောရွေးချယ်စရာ!
Sony က Microsoft က & Co. , Form ကိုမဟာမိတ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှ
ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးမားဆုံးအမည်များတချို့ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မှာရာသီဥတုအကျပ်အတည်းတုံ့ပြန်အရေးယူမှထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကြ [ ... ] နောက်ထပ်
ယူနိုက်တက်စတိတ်မှလူငယ် ဦး ဆောင်သောရာသီဥတုသပိတ်မှောက်ခြင်း
ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၊ ဆင်းရဲသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများသည်ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အဆိုးရွားဆုံးသက်ရောက်မှုများကိုခံကြရသည်။ စက်တင်ဘာလတွင် […] နောက်ထပ်
in အခြားနည်းလမ်းများနှင့် Opinions, ဗီဒီယိုများ
1 အမျိုးသမီးများအတွက် 16 သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်လိင်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ရှိခြင်းဆိုရမည် | NowThis
အမေရိကန်သတင်းနှင့်လက်ရှိဖြစ်ရပ်များကိုယနေ့ခုနှစ်တွင်အရင်းအမြစ်, အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံးများ၏ဂျာနယ် [ ... ] အမေရိကန် 13,310 အမျိုးသမီးတွေစစ်တမ်းကောက်ယူကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုဖြန့်ချိ နောက်ထပ်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Greenpeace တောင်တက်သမားများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကြီးဆုံးရေနံတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဘာကြောင့်ဒီကိုလုပ်ကြတာလဲ အရင်းအမြစ် နောက်ထပ်
in အခြားနည်းလမ်းများနှင့် Opinions, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု, ဗီဒီယိုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Planet ကိုအရင်းရှင်ဝါဒအသက်ရှင်လွတ်မြောက်နိုင်ပါသလား?
ကြှနျုပျတို့သညျဤရေးလိုက်အဖြစ်အမေဇုံမိုးသစ်တောစာသားလည်းမီးလောင်နေသည် source ။ [ ... ] ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကြီးမားတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပြီး, အဲဒါကိုမောင်းထုတ်ခံရသည့်အဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖွင့် နောက်ထပ်
ဂျိမ်း Corden ကိုယူဘီလ် Maher ရဲ့အဆီအရှက်ကွဲခြင်းတုံ့ပြန်သည်
in အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့, ဗီဒီယိုများ
in အခြားနည်းလမ်းများနှင့် Opinions, အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့, ဗီဒီယိုများ
တစ်ခုမှာမိန်းမ, One Community, One အခက်အခဲအကျပ်အတည်းများ။
ရေ Stop ပိုက်လိုင်းကာကွယ်ပါ
in အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့, ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပို့လိုက်ကြတယ်, ဗီဒီယိုများ
အာတိတ်နေထွက်နှင့်အတူ Whale သိပ္ပံပံ့ပိုး Greenpeace
in အခြားနည်းလမ်းများနှင့် Opinions, အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့, ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပို့လိုက်ကြတယ်, Initiatives နှင့်အသနားခံ, ဗီဒီယိုများ
အဆိုပါ Next ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာသီဥတုအပေါ်ဥပဒေရှိရမည်
အဆိုပါ Sargasso ပင်လယ်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် - အဘယ်အရာကို Sargasso?
ကလေးပင်လယ်လိပ်ဖြစ်ရတာခက်ခဲပါတယ် 1 ပေါက်ဖွားများမှ 1,000 ထက်ငယ်သောအရွယ်ရောက်သည်အထိရှင်သန်နိုင်သည်။ ကမ်းခြေပေါ်ရှိပထမဆုံးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းငှက်များ၊ ကဏန်းများ၊ နောက်ထပ်
#WorldRefugeeDay ချဉ်းကပ်သကဲ့သို့, ဒုက္ခသည်တစ်ဦး၏စစ်မှန်တဲ့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဝေမျှဖို့ခဏယူပါ။ အတူတူအတူတကွအမေရိကားရဲ့အစဉ်အလာအရှိဆုံးကိုကြိုဆိုခြင်း၏အစဉ်အလာကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်
တိရိုင်ယန်ဟာ DNC များအတွက်ကို Message ရှိပါတယ်: "ကျနော်တို့ကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆွေးနွေးငြင်းခုံလိုအပ်ပါတယ်"
ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဖြစ်သော Tim Ryan သည်အိုင်အိုဝါရှိ Greenpeace ရှိအမေရိကန်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားရာသီဥတုအကျပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ရိုင်ယန်လည်း […] နောက်ထပ်
ဒုက္ခသည်များ၊ နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူများ၊ TPS ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများကကဗျာကိုလွတ်လပ်သောရုပ်ထု၏အောက်ခြေတွင်ရွတ်ဆိုကြသည်။ ယင်း၏စကားလုံးများသည်မတူကွဲပြားမှုများ၊ နောက်ထပ်
ဂျူလီယန်ကက်စထရိုသည်ဇွန်လ 15၊ 2019 အိုင်အိုဝါ၊ အိုင်အိုဝါ၊ အိုင်ဒါးရှိကင်ပိန်းမှတ်တိုင်တွင်အများပြည်သူပိုင်မြေများပေါ်တွင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများငှားရမ်းခြင်းအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ရန်ကတိပြုသည်။ နောက်ထပ်
ဇွန် 11၊ အိုင်အိုဝါအိုင်အိုအွမ်ဝါ၌မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရပ်နားစဉ်တွင် 2019 ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာထုတ်လုပ်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရန်သဘောတူခဲ့သည်။ နောက်ထပ်
Oxfam သည် Sadie Statman နှင့်တစ်ယောက်တည်းသွားသည်
မင်းကိုဘာကလှုံ့ဆော်ပေးတာလဲ Oxfam Supporter, Sadie Statman သည်အစားအစာရရှိခြင်းနှင့် Oxfam ကိုထောက်ပံ့ရန်အဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟူသောသူမ၏အကြံအစည်များကိုမျှဝေသည်။ အရင်းအမြစ် နောက်ထပ်
Oxfam သည် Latanya Mapp Frett နှင့်တ ဦး တည်းသွားကြသည်
မင်းကိုဘာကလှုံ့ဆော်ပေးတာလဲ Oxfam ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သော Latanya Mapp Frett သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏မတရားမှုနှင့် Oxfam ကိုပံ့ပိုးရန်အဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်ပေးသနည်းဟူသောသူ၏အတွေးများကိုမျှဝေသည်။ […] နောက်ထပ်
Oxfam သည် Sara Erichson နှင့်တ ဦး တည်းသွားကြသည်
မင်းကိုဘာကလှုံ့ဆော်ပေးတာလဲ Sara Erichson သည် Oxfam Supporter ၏စကားကိုနားထောင်ပါ။ သူမသည်ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးများအတွက် Oxfam ကိုထောက်ပံ့ရန်အဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသနည်း။ အရင်းအမြစ် နောက်ထပ်
username Password ကို
Option ကိုရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့်အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုတခုအပေါ်မှာပံတောင်းကြေးနီတူးဖော်ရေး, လုံးဝလွတ်လပ်သောနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ "လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်း" ဖြစ်ပါတယ် (နှင့် 2014 ကတည်းကလည်းဂျာမန်ဘာသာစကားပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ) , ဝေဖန်-အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကောင်းမြင်, အဖြစ်မှန်၏မြေပြင်ပေါ်တွင် - အတူတူကျနော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းကိုပြသခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်တီထွင်မှုများနှင့်ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေအတွေးအခေါ်များကိုထောကျပံ့။ ထို option အသိုင်းအဝိုင်းသီးသန့်သက်ဆိုင်ရာသတင်းသူ့ဟာသူခုထဲကနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အရေးပါသောတိုးတက်မှုများပါရှိသည်။ နောက်ထပ် INFO
အဆိုပါဂျာမန်ဘာသာစကား option ကိုပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်းတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးဥရောပ၌ 4x ပေါ်လာသည်နှင့်ဖြစ်ပါသည် ကြေးပေးသွင်းအတွက် နှင့်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများမှထံမှရရှိနိုင်ပါ။ အဘို့အ app ကိုစတိုးဆိုင်တစ်ခု epaper အဖြစ် Apple နှင့် အန်းဒရွိုက် အဖြစ်ပေါ် readly, Readit,Kiosk.at နှင့် ယူနိုက်တက် Kiosk အ.
မူပိုင်: Option ကိုမီဒီယာ EU 2019
ဒီနေရာတွင်သင်တို့ရှေ့မှဖန်တီးပါတယ်အားလုံး collection များကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။